किन कुनै पनि माला बनाउँदा वा पूजा गर्दा १०८ नै हुनु पर्ने कारणहरु केके हुन् ? – Hindu Cultural Center
Home Event Calendar किन कुनै पनि माला बनाउँदा वा पूजा गर्दा १०८ नै हुनु पर्ने कारणहरु केके हुन् ?
किन कुनै पनि माला बनाउँदा वा पूजा गर्दा १०८ नै हुनु पर्ने कारणहरु केके हुन् ? १०८ अंकको महत्व के हो ?
ज्यो. पं राजेन्द्र खनाल
मे २८, २०१९ ⇒सनातन वैदिक धर्मावलम्वी तथा हिन्दु, बौद्ध तथा किरातहरुले जप्ने माला १०८ नै हुनु पर्ने रहस्य तथा कारणहरु केके हुन् ?
१०८ अंक नै हुनु पर्ने विविध कारणहरु छन् हाम्रो सनातन हिन्दु संस्कारमा, जसमध्ये यी प्रमुख कारणहरु लाई लिन सकिन्छ ।
सर्वप्रथम त सूर्यको व्यास (Diameter) पृथ्वीको व्यासभन्दा १०८ गुणा ठूलो छ । अनि सूर्यदेखि पृथ्वीसम्मको औषत दूरी सूर्यको व्यासभन्दा १०८ गुणा बढि छ।
ज्योतिषशास्त्रका अनुसार १२ राशि र ९ ग्रहहरू हुन्छन्, जसलाई गुणा (Multiply) गर्दा १०८ हुन आउँछ ।
ज्योतिषशास्त्रका अनुसार २७ नक्षत्रका ४ /४वटा पाउ ( अक्षर) हुन्छन् जसलाई गुणा गर्दा पनि १०८ नै हुन आउँछ । मनुष्य भित्र जम्माजम्मी ३६ गुणहरु हुन्छन् यिनलाई ३ ले गुणा गर्दा पनि १०८ नै हुन्छ ।
पौराणिक मान्यताअनुसार, एक प्राणीले एक दिनमा करिब २१,६०० पटक अजपा गायत्रीको नामबाट श्वास फेर्ने गर्दछ, “षट्शतानि दिवा रात्रौ,सहस्त्राण्येकविंशति: एतत्संख्यान्वितं मन्त्रं जीवौ जपति सर्वदा” .जसमध्ये गणेशलाई ६००, ब्रह्मालाई ६०००, विष्णुलाई ६०००, रुद्रलाई ६०००, जीवात्मालाई १०००, गुरुलाई १००० र विश्वरूप आत्मालाई १००० गरी २१६०० पटक हंस नामले अजपा गायत्री को जप गर्नाले हाम्रो शरीरमा रहेका १०८ अंगहरुलाई सहयोग पुग्दछ ।
तान्त्रिक विद्याअनुसार सौर्य ऊर्जा १०८०० र अर्को १०,८०० लाई चन्द्र ऊर्जा मानिन्छ । १०,८०० लाई १०० ले भाग गर्दा पनि १०८ नै हुन्छ ।
संस्कृत भाषामा ५४ वटा अक्षरहरू छन्, जसको आफ्नै शिवपक्ष र शक्तिपक्ष हुन्छन्। जसको कुल निकाल्दा १०८ अक्षरहरू हुन आउँछन् ।
हिन्दु धर्ममा १०८ पुराणहरू र १०८ उपनिषदहरू छन् ।
अध्यात्मवादका अनुसार, मानिसको शरीरमा हजारौँ शक्तिरेखाहरू हुन्छन् र त्यसको प्रतिच्छेदन भएको विन्दुलाई नै ‘चक्र’ भनिन्छ। अनि हाम्रो मुटुनेर हुने हृदयचक्र १०८ वटा शक्तिरेखाहरू मिलेर बनेका हुन्छन्, जसमध्ये एक रेखा ‘सुषुम्ना’ शिरचक्रतर्फ फैलिएको हुन्छ। आत्मज्ञान प्राप्त गर्नको लागि यही शिरचक्रलाई महसुस गर्नुपर्छ भन्ने अध्यात्मशास्त्रीहरू विश्वास गर्दछन्।
यदि कोही व्यक्ति ध्यानमा तल्लीन भएर दिनमा केवल १०८ पटक मात्रै सास फेर्न सक्षम हुन्छ भने उसले बुद्धत्व प्राप्त गर्नसक्ने अध्यात्मशास्त्रमा उल्लेख गरिएको छ।
हिन्दु धर्मका पुराणका अनुसार, १ लाई ज्ञान, ० लाई पूर्ण ज्ञान अर्थात् सम्पूर्णता र ८ लाई अनन्त ज्ञानको प्रतीक मानिन्छ।
रुद्राक्ष मालाको टुप्पामा हुने एउटा दाना, जहाँबाट गन्न सुरु गरिन्छ, जुन १०८ मा पर्दैन, त्यसलाई सुमेरु अथवा मेरु भनिन्छ। यसको मतलब हुन्छ, आदि पनि त्यही र अन्त्य पनि त्यही ।
एकदेखि १०० सम्मका अंकलाई एकैपटक मिलाएर लेख्नु पर्दा १०८ लेखिन्छ ।
१०८ योगमुद्रा, १०८ शक्तिपीठहरु
१ भनेको पृथ्वी ० भनेको आकाश र ८ भनेको अष्टदल भएकोले १०८ को महत्व अत्यधिक रहेको छ